Horudhac: Aston Villa vs Manchester City… (Imise dhibcood ayay u baahan tahay Citizens si loogu caleemo saaro hanashada horyaalka Premier League?) – Gool FM
Horudhac: Aston Villa vs Manchester City… (Imise dhibcood ayay u baahan tahay Citizens si loogu caleemo saaro hanashada horyaalka Premier League?)
(Aston) 21 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa caawa soo dhoweynaysa naadiga Manchester City kulan qeyb ka ah horyaalka Premier League.
Citizens ayaa u baahan 11-dhibcood oo kale si ay u xaqiijiyaan ku guuleysigooda horyaalka Premier League markoodii saddexaad afartii xilli ciyaareed oo ay ka hoos ciyaarayeen Tababare Pep Guardiola.
Dhinaca kale The Villans kooxda lagu naynaaso ayaa dib ugu soo laaban karta 10-ka sare ee horyaalka Premier League kaddib natiijooyin wanaagsan oo ay la imaanayeen muddooyinkii dambe.
Xiddiga garabka kaga ciyaara Aston Villa ee Trezeguet ayay lagama maarmaan noqotay in qalliin looga sameeyo jilibka waxaana uu maqnaanshaha kula biiray Kabtanka kooxda martida loo yahay ee Jack Grealish.
Morgan Sanson ayaa sidoo kale garoomada kaga maqan dhaawac jilibka ah, halka Wesley uusan diyaar u ahayn inuu dib ugu soo laabto garoomada kaddib markii uu maqnaa in ka badan 15 bilood.
Manchester City ayaa weyn doonta kulankan laacibkeeda khadka dhexe ee Kevin de Bruyne, kaasoo la dhibtoonaya dhaawac ka soo gaaray cagta midig iyo canqowga intii lagu guda jiray kulankii afar dhammaadka FA Cup-ka ee Sabtidii.
Sergio Aguero ayaa sababo aan la cayimin ku seegay garoomada saddex kulan, lamana oga haddii uu ciyaari karayo kulankan iyo haddii kale.
>- Aston Villa ayaa guuldarro la kulantay 11 ka mid ah 13-keedii kulan ee la soo dhaafay horyaalka Premier League, guusha kaliya oo ay gaareen intii lagu guda jiray waqtigaas waxay timid bishii September ee sanadkii 2013-kii.
>- Manchester City ayaa guuleysatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay wajahday Villa, waxaana ay cel-celis ahaan kulamadaas dhalisay 15-1.
>- Kooxda Dean Smith ayaa guuldarreysatay kala bar 16-keedii kulan ee horyaalka ay ciyaartay sanadkan 2021-ka, waxaana ay kala guuleysteen kaliya labo jeer lixdeedii isku day ee ugu dambeeyey.
>- Villa ayaa guuldarreysatay siddeed ka mid ah 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay wajahday kooxda markaas hoggaaminaysa horyaalka, markii ugu dambeeyey oo ay natiijo fiican ka keenaan koox markaas hoggaaminaysa horyaalka, waxa ay ahayd mar ay 1-0 uga adkaadeen Chelsea sanadkii 2014-kii iyo barbaro goolal la’aan ah oo ay la galeen Manchester City sanadkii 2015-kii.
>- Emiliano Martinez ayaa weli u baahan hal mar inuu shabaqiisa gool ka ilaashado si uu u gaaro rikoorkii Brad Friedel kooxda Villa ee horyaalka Premier League, kaasoo si rikoor ah shabaqiisa gool uga ilaashaday 15 jeer hal xilli ciyaareed waxaana ay ahayd fasal ciyaareedkii 2009-10.
>- Ollie Watkins ayaa markii ugu horreysay gool dhalin kara saddex kulan oo xiriir ah oo uu ciyaaray horyaalka Premier League.
>- Waxa uu u jeedkoodu yahay inay gaaraan 10 kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League oo ay bannaanka ku ciyaareen, waxaana ay taasi ka yeeli kartaa inay noqdaan kooxdii ugu horreysay ee guulahaas bannaanka ku soo gaarta labo jeer, waxaana ay hadda ka hor bannaanka ku soo adkaadeen horyaalka 11 kulan intii u dhexeysay May illaa December sanadkii 2017.
>- City ayaa sidoo kale haysata rikoorka kooxda 16 kulan oo xiriir ah bannaanka ku soo adkaatay tartammada oo dhan, iyagoo aan laga badin oo (unbeaten) ah, 19 kulan oo ay barti ahaayeen.
>- Waxa ay guuldarro la kulmeen kulankoodii la soo dhaafay horyaalka oo ay wajaheen Leeds, laakiin guuldarrooyin isxiga sooma gaarin City tan iyo bishii December ee sanadkii 2018.
>- Manchester City ayay lagama maarmaan tahay inay helaan 11 dhibcood lixdooda kulan ee ugu dambeysa si ay u xaqiiqsadaan ku guuleysiga horyaalkoodii shanaad ee Premier League.
>- Man City ayaa guuleysatay 14 kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League marka ay ciyaareyso maalin Arbaco ah, waana heerkoodii ugu fiicnaa ee maalin gaar ah marka laga reebo kulammada ay dheeleen Sabtida taariikhda tartankan.
>- Sergio Agüero ayaa dhaliyey 10 gool lixdiisii kulan ee la soo dhaafay oo uu wajahay Aston Villa tartammada oo dhan, waxaana goolashaas ku jira saddexleeydii uu ugu shubay kulankii ay 6-1 kaga adkaadeen xilli ciyaareedkii hore.